ကွန်ပျုတာ.နည်းပညာစာအုပ်များနှင့် စာကြည့်တိုက်.. - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ကျွန်တော် ဒီတခါတော့ စာအုပ် အစီစဉ်လေး တခုသွားတွေးမိတာနဲ့ ကျွန်တော် ဒီပို့စ်လေးကို ရေးဖို့ အစီစဉ်လေး ဖြစ်လာမိတာပါ.. ကျွန်တော် အရင်က စုဆောင်းခဲ့သမျှပေါ့.. ဖတ်ဖို့ မှတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်.. အများကြီး ကို တပြိုင်တည်းပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။.ဒါပေ့မယ် အကုန်လုံးကို မဖတ်ဖြစ်မှာကိုလည်း စိုးရိမ်လာမိတယ်။ တကယ်သာ အဲ့လိုပြောနေရတာပါ စိတ်ကလည်းပေးချင်မိတယ်(စာအုပ်တွေကိုလေ ) မျှဝေချင်ပေးချင်နေတာနဲ့
အကို အစ်မတွေ အနေနဲ့ကတော့ လိုတဲ့ စာအုပ်တွေကို ယူနိင်ပါတယ် ဟိုး အရင်ကတည်းက စာအုပ်တွေလည်းပါသလို အကုန်အစုံပါပဲ့ တက်နိင်ရင်တော့ တအုပ်ဒေါင်း တအုပ်ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ တကယ်အဲ့လိုမှ မဖတ်ဘူးဆိုရင် မဖတ်ဖြစ်ကြတော့ဘူး ဆိုတာ သေချာတယ်။ ဒီပို့စ်မှာပဲ့ အကုန်တင်ပေးလိုက်ဖို့ စီစဉ်လိုက်ပါတယ် .။ ဖိုရမ်က စာအုပ်တွေ တော်တော်မျာများလည်ပါပါတယ်။နောက်ထပ် လည်း အများကြီးပါ ။ နောက်ထပ်ကတော့ ကျွန်တော် ပါဝင်သော စာအုပ်များဆိုပီး အစဉ်လိုက် ခေါင်းစဉ်တခု ချင်းဆီ အောက်မှာ စာအုပ်နာမည် နဲ့ခေါင်းစဉ်တွေ ကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ဘာလို့ ရေးပေးလိုက်တာလည်း ဆိုတာလေး ကို နည်းနည်းလေ ရှည်လိုက်ဦးမယ် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ က လူတွေ က တလင့်ဝင် တလင့်ထွက် ကြည့်ရတာ အခက်ခဲ့ ရှိနိင်ပါတယ် နက်က သိပ်မကောင်းတော့ ။ အဲ့တော့ ဘယ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ မိမိ လိုချင်တဲ့ စာအုပ်တွေ ရှိတယ် ဆိုတာကို ဒီမှာ ဖတ်ပီး တခါတည်းသိတာနဲ့ နာပါတ် ဘယ်လောက်မှာ တန်းရှိတယ် သိအောင်လို့ ကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်တာပါ။ နောက်တခုကတော့ ဒီအစီစဉ်လေးကို ချမိတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ နက်ရတဲ့နေရာမှာပဲ့ အမြဲ့နေရမှာမဟုတ်ပါဘူး တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာနေရာ ဒေသတွေကို ကျွန်တော်တို့ ပြန်သွားကြတဲ့အခါ အမှတ်တရ ပိုစ့်တခု အဖြစ်နဲ့ ကျန်နေစေခဲ့ချင်တာ ရယ်ကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်တော်ပြန်သွားရင် နက်ရမယ် မရဘူး ဆိုတာကို မသေချာပါဘူး။ ဒါပေ့မယ် အမှတ်တရ ပိုစ်တွေထဲ့မှာလည်း ကျန်ခဲ့အောင် အကျိုးရှိဆုံး ပိုစ်တပိုစ် ဖြစ်အောင် ကျွန်တော် အတက်နိင်ဆုံး ကျွန်တော် စုဆောင်းဖတ်ရူခဲ့ရတဲ့ စာအုပ်တွေ အားကိုးခဲ့ရတဲ့ စာအုပ်တွေဆိုလည်း မမှားဘူးလို့ပြောလို့ ရတဲ့ စာအုပ်တွေကို အမှတ်တရ အဖြစ်တင်ပေးခဲ့တာပါ။ ။
နောက်တခုကတော့ ဒီပိုစ်မှာပဲ့ စာအုပ်တွေကို တစုတစည်းတည်းရစေချင်တာရယ်ကြောင့်ပါ။ အကိုအစ်မတို့ အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိပိုစ်တပိုစ် ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည့်နေမိတယ်။ ဒီပိုစ့်ကို ရေးနေတဲ့ချိန်မှာပဲ့ ကိစ္စတခုကိုသွားစဉ်းစားမိတာနဲ့ပဲ့ ဒီပိုစ်မှာလိုအပ်မယ့် လိုအပ်ချက်ကို တခါတည်းဖြည့်ပြောပေးလိုက်ပါတော့မယ်။ ကျွန်တော် လင့် တွေ ပြန်ညွှန်းတဲ့ချိန်မှာ ခေါင်းစဉ်ကြီးတခုလုံးကို တလင့်ပဲ့ ညွှန်းတာ ပါလာမှာပါ။(စာအုပ်က အရမ်းများတယ် ဆိုရင်) ဥပမာ C# ခေါင်းစဉ်နဲ့ စာအုပ်တွေမှာ စာအုပ်အရေအတွက် အရမ်းများမှာပါ။။။ အဲ့ချိန်မှာ ကျွန်တော် တလင့်ပဲ့ ညွှန်းပါမယ်။ အဲ့လင့်ထဲ့မှာပဲ့ စာအုပ်အကုန်လုံး တကန့်စီပါလာမှာပါ။အဲ့ပါလာတဲ့ချိန်မှာ တက်လာမယ့် Error ကို ဖြေရှင်းလိုက်ပါတယ် ။ တခါတည်းနဲ့ အားလုံးး အဆင်ပြေနိင်အောင်လို့ပါ။
ကျွန်တော် အောက်မှာပေးထားတဲ့ လင့်တလင့်ကို ၀င်တဲ့ခါမှာ စာအုပ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်ပါတာ ရှိတယ် .။ ၂၀၀ ကျော်ပါတာ ရှိတယ် ။ အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာ။ အဲ့လို စာအုပ်များလာတာနဲ့အမျှ တက်လာမယ့် ပြသနာကတော့ အဲ့ဒီစာအုပ်အားလုံးကို စာမျက်နာလိုက် တကန့်စီကြည့်ပေးဖို့ပါပဲ့ တကန့်စီ ဘယ်လိုကြည့်မလည်းဆိုတာကို အောက်က ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ရင် ရှင်းသွားမှာပါ။
ညာထောင်လေးမှာ Page ဘေးမှာ အောက်ကို ဆိုက်နေတဲ့မြှားလေးရှိပါတယ် ။ အဲ့တာလေးကိုရွေးကြည့်လိုက်ပါ စာမျက်နာရှိသလောက်ကို 1,2,3,4,5…… ပေါ့နော် အစဉ်လိုက်ကျလာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ အစဉ်လိုက်မှာ.. မိမိ လိုချင်တဲ့ စာအုပ်ကိုရှာယူပီးဒေါင်းပါ .။ Page တခုမှာ 20 ထားပီး ကြည့်လို့ရသလို့ 40 .60 ထားပီး ကြည့်မယ် ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။
စာအုပ်များတဲ့အပိုင်းတွေမှာ ကျွန်တော် ခေါင်းစဉ်တွေ ရေးပေးဖို့တော့ အစဉ်မပြေမှာစိုးလို့ပါ။
စုစုပေါင်း ၈ ဂစ် နည်းပါး ရှိပါတယ်။
AutoCAD 2002 ( Myanmar)
Autocad နှင့် ဆိုဒ်ကောင်းလေး
၂။ Blog နဲ့ ပတ်သတ်သမျှ အကုန်ပါပါပါတယ်.( wordpress . Joomla )
Basic Joomla Google Apps
How to install Wordpress by mmWordPress
Best free hosting for WP
How to  Installing WordPress Simply
ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကို အပိုင်း ၄ခု ခွဲထားပါတယ်။ တပိုင်းလိုက်စီလိုက်ကို အစီစဉ်တကျလေး ဖြစ်အောင်လို့ပါ။ တပိုင်းချင်းဆီ ရှာရလွယ်အောင်လည်း နောက်ပိုစ်တွေမှာ တပိုစ့်ကို ခေါင်းစဉ် ၄ ခုဆီနဲ့ တင်ပေးပါ့မယ် ခေါင်းစဉ် ၄ ခုစီနဲ့ တင်ပေးကာကျရင် ၄ ပိုစ့်ဆိုရင် စာအုပ် အကုန်ပီးပါပီ။ ပို့အရမ်းရှည်နေရင် ရှာရတာ မျက်စိနောက်မှာစိုးလို့ပါ. အယ် ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကျွန်တော် Tutorial video ဖိုင်တွေကိုပါ တင်ပေးဖို့ စီစဉ်ထားပါသေးတယ် …
ဖိုရမ် ညီအကိုမောင် နှမ အားလုံးကျန်းမာ ရွှင်လန်း ပြုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.။
မွန့်လေး ရဲ့ .......
Last edited by သန့်ဇင်ဌေး; 27-03-2011 at 04:46 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 80 ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုကိုသီဟ, ကိုစံငြိမ်း, ခိုင်မြဲ, စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, တီဘွား, ထွန်းအောင်ကြူ, နီထွန်းဦး, ဘဘကြီး, မျိုးမင်းဆန်း, ရဲထက်သာ, လမ်းပြကြယ်, ဝင်းကျော်ဦး, ဟန်မိုးလွင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, အိုင်တီကောင်လေး, ကောင်းကောင်း, ကျော်ကျော်မောင်, စောထွန်းဝင်း, ဇော်ရဲပိုင်, ဇေကြီး, တောကြောင်, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်ကို, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, သွေးထက်, အောင်မင်းကို, အောင်ပြည့်ဖြိုး, အေးမင်းမောင်, ဝေယံမောင်, ပြည့်ဖြိုးကိုကို, မြင့်မိုရ်, မြန်အောင်သား, amaung344, arkaraung, Aung Aung, aungphyo, AZM, azp09, bagothar85, blackNwhite, bonge, Emc Arkar, foothet, g00gle, goldstar, htoo war, htun30, juwathan, kingofvirus, kyarminthar, KznT, Lwin Thu, minthike, minthumon, moe san dar, nayzawaung, Ngekhaing, omnitek team, paradise(SMTU), phoetharlay, PyaitSone, runner.zaw, saiaikbee, sAnDViper, shinthantnyein, spadeone, thetzin, thura.it, thureinsoe, wunna313, yawnathan, Ye Aung, zinnaing, zo, zweaungmyintun
အပိုင်း ၂ ….
ဆရာတယောက်မေးဘူးတဲ့ စကားလေး တခွန်းပြောချင်တယ်။ မင်း တက်မြောက်သင်ယူထားတဲ့ ပညာကို သေရွာသယ်သွားမလား နောက်လူကို သင်ပေးခဲ့မလားတဲ့ ? .အကိုအစ်မ ညီညီမလေး တွေရော. ဘယ်လို ဖြေကြမလည်း နောက်လူငယ်တွေကို သင်ပေးခဲ့မလား သယ်သွားကြမလား? စဉ်းစားကြည့်ပေးပါ အဲ့စကားက အရမ်းကို လေးနက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ အကုန်လုံး (Country) နဲ့တောင် ချီပီးပြောလို့ ရတဲ့ စကားမျိုးပါ ။ ဒီနေရာလေးမှာပဲ့ စာ ရေးဖို့ တိုက်တွန်းရင်း အစပြုချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အပိုင်း ၂ ကို ဆက်ပီး တင်ပေးပါ့မယ် အပိုင်း ၂ မှာတော့ ဒီအပိုင်းတွေ ပါပါ့မယ် ။ ကက ကွန် က ထုတ်သမျှ စာအုပ်တွေရယ်… ကိုသံလုံငယ် ရေးခဲ့ဘူး တဲ့ FAQ စာ အုပ်တွေ . (ကိုသံလုံငယ်ပြန်ကာနီးက ပေးခဲ့ဘူးတဲ့ စာအုပ်တွေပါ ) တော်တော် များများကောင်းပါတယ်။ Database သင်ခန်းစာမျးပါပါတယ်။ နောက်ဆုံး တခုကတော့ … Photoshop ပါ ။ ဒီနေရာလေးမှာ အပြည့် နည်းပညာ ပို့စ်တွေ အပြင် ကျွန်တော် ဖတ်ခဲ့ မှတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ စာအုပ်ကောင်းတွေကို လည်း တင်ပေးသွားမှာပါ။ တချို့က တရား စာအုပ်တွေလည်းပါပါတယ်။ တချို့က လည်း လူနေမူ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းတွေလည်းပါမှာပါနောက်ပိုစ်တွေမှာ။ ကျွန်တော် အတက်နိင်ဆုံး လင့်တွေကို အဆင်ပြေအောင်လည်း အောက်ဆုံးမှ ပြန်ညှိပီး ထပ်ဖြေပေးပါ့မယ်။
ကျွန်တော် ဒီအပိုင်းကိုတော့ အကို အစ်မတို့ အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ဖိုတိုရှော့ဆို တာ နည်းပညာလေ့လာသူများပါ မက အလှဆင်ချင်တဲ့ သူများအတွက်ပါ လေ့လာသင့်တဲ့ အရာတခု မဟုတ်ပါလားဗျာ။ အခြေခံပိုင်းလေးတွေကို အဓိက ထားရေးထားတာလေးတွေပါ။ နောက် ထပ် Tutorial ဖိုင်တွေထဲ့မှာလည်း ကျွန်တော် ဖိုတိုရှော့ကို ဦးစားပေးတင်ပေးပါဦးမယ်။ ခုတော့ စာအုပ်ဖတ်ပီးတော့ လေ့လာထားကြည့်ပေးပါဦး။ ကျွန်တော် လည်း ဖိုတိုရှော့ကို တော်တော် ၀ါသနာ ပါတယ်ဗျ. တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ။ အကို အစ်မတို့လည်း စာလည်းဖတ်ရင်း လိုက်လည်း လုပ်ကြည့်ရင်း စာလည်း ဖတ်ဖြစ်တာပေါ့။ ဆော့ဝဲတွေကိုတော့ ဖိုရမ်က ဒီနေရာမှာ ကိုကျောက်ဖြူ တင်ထားပေးတာ ကို တွေ့မိတယ် ကိုကျော်ဇင်သန့်လည်း ဒီနေရာမှာ တင်ထားပေးတာကိုတွေ့မိတယ်
AK009FinalPhotoshopLesson *(၈) အုပ်ပါ။
Adobe photoshop. 7.0
Word 2010 All in one
Photoshop note 1
Photoshop note2 * မိသားစု ဖိုရမ်က စာအုပ်ပါ။
Database သင်ခန်းစာများ ….
ဒီ database ဆိုတာကလည်း မသိမဖြစ် သိထားရမယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေ့မယ် C panel တွေကို ထိန်းချုပ်တဲ့အခါ . ဥပမာ ဆိုဒ်တွေနဲ့ ပတ်သတ်လာတဲ့အခါမှာ မသိမဖြစ်လို့ ဖြစ်လာရတဲ့ လေ့လာသင့်တဲ့ အရာတခုပါပဲ့။ allowing data creation and maintenance အဲ့လို အပိုင်းတွေပေါ့ဗျာ.။ ပီးရင် နောက်ထပ် အများကြီးပေါ့ ဒီ database ကိုလေ့လာရင်း စီမံခန့်ခွဲမူ အတက်ပညာကိုလည်း မိမိ ဘာသာ တက်မြောက်အောင် လေ့လာသင်ယူသွားနိင်ကြဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ အဲ့တာဆို ဘ၀မှာ အခက်ခဲ့ တွေ အနည်းအကျဉ်းတော့ ပြေလည်သွားဦးမှာပါ။
Database Lessons 1 >> 14  ( 14 အုပ်)
ကို သံလုံငယ် ရေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေပါ ။ ပြန်ခါနီးက ချပေးခဲ့တာတွေလို့ ပြောရမှာပါ။ ကိုကြီး ပြန်ခါနီးကမှ ပေးခဲ့တာပါ ။ ရရချင်းတုန်းကတော့ ဘယ်စာအုပ်ကိုမှ တန်ဖိုး ထားရမှန်းမသိခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ ခုတော့ ကျွန်တော် ဘယ်စာအုပ်ကိုမဆို တန်ဖိုးထားဖတ်တက်နေပါပီ ။ အကိုအစ်မတို့လည်း စာအုပ်တိုင်းရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အနှစ်သာရတွေကို ရရှိစေဖို့ တန်ဖိုးထားဖတ်ပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဘယ်အရာမဆို အလေးနက်ထားပါ။ အပြင်စကားမဟုတ်တဲ့ စကားတခွန်းနဲ့ပြောလိုက်ချင်တယ် ။ ဘယ်အရာမဆို အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ပါ ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးကို ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တေ်ာ တက္ကသိုလ်တက်တုန်းက ဆောင်ပုဒ်လေး တခုပါ။
FAQ 1 >>>> 4( ပေါင်း  ၄အုပ် )
Hardisk . အကြောင်း
Making super fast Your XP
Making super fast Your Vista
Making  .chm file
Links for all reader
Choose foe buildingaPC
ကကကွန် က ထုတ်ပီးသမျှ စာအုပ် အကုန်နီးပါးပါပါတယ်။
ကကကွန်က စာအုပ်တွေကတော့ ရှည်တယ် ကောင်းတယ် ပြီးပြည့်စုံသလောက်ရှိတယ် နားလည်လွယ်တယ် အဆုံးထိ ဖတ်ပီးတဲ့အချိန်မှာ အပြည့် အ၀ လောက်နီးပါးရတယ် အခြေခံကျတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ အကိုအစ်မတို့ လေ့လာကြည့်ပါ ။ တကယ်ကိုပြောတာပါ။ အစ်ကို အစ်မ တို့ အားလုံး လေ့လာ ဖတ်မှတ်စေချင်တယ် ။ ဒါမှ အခြေခံတွေကနေ အမြင့်ကို မြင့်တက်နိင်လာမှာမို့ပါ။ ကျွန်တော်လည်း လေ့လာနေဆဲလူတယောက်ပါပဲ့။ ပညာဟူသည် အိုသည်မရှိပါဘူး။
လိုအပ်မယ့် အပိုင်းတွေကိုပဲ့ ကျွန်တော် အဓိက ထားတင်ပေးတာပါ။ အကို အစ်မတို့ အဆင်ပြေဖို့လည်း လိုပါတယ်.ဒေါင်းရတာ အဆင်မပြေမူ ရှိရင် ပြောခဲ့နိင်ပါတယ် ။နောက်ဆုံး ပိုစ်ကျရင်လည်း လင့်တွေကို ထပ်ဖြည့်ပေးဖို့ စဉ်းစားထာပါသေးတယ် ။ လင့်တွေ သေမသွားအောင်လို့ပါ ။ အကို အစ်မ အားလုံး အဆင်ပြေမယ် လို့ ထင်ပါတယ်
Last edited by သန့်ဇင်ဌေး; 27-03-2011 at 07:10 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 49 ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုစံငြိမ်း, စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, ဒဿဂီရိ, ဘဘကြီး, မင်းထက်လှိုင်, မျိုးမင်းဆန်း, လမ်းပြကြယ်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, အလွမ်းမင်းသား, ကောင်းကောင်း, ဇော်ရဲပိုင်, ဇေကြီး, တောကြောင်, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်ကို, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, အောင်မင်းကို, အောင်မိုးထွန်း, အောင်ပြည့်ဖြိုး, amaung344, arkaraung, Aung Myo Kyaw 94, aungphyo, AZM, bagothar85, creative2020202020, Emc Arkar, FollowITBoy, g00gle, htaynaingwin, KznT, Lwin Thu, minthumon, paradise(SMTU), phoetharlay, PyaitSone, sakuracherry, sawehlor, thein zaw min, thetzin, thura.it, thureinsoe, yawnathan, zo
ဒီနေ့ တော့ အပိုင်း ၃ လေးကို ကျွန်တော် ဆက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ပိုစ်တခုကို မကြာချင်တာလည်းပါလို့ပါ ။ ကျွန်တော် နောက်ထပ် တပိုစ်ဖြစ်တဲ့ Video editing ang Burning ပိုင်းကိုလည်း တချက်ကူးချင်လို့ မလို့ ဒီအပိုင်းလေးကို အပြတ်ဖြတ်ပေးမလို့ပါ။ အပိုင်း ၃ မှာတော့ရိုးရိုးလေးတွေ ပါပဲ့.။ C# . အကြည်တော်ဝထ္တုများ Microsoft office နှင့် နောက်ဆုံး တခုကတော့ အထွေထွေ ဗဟုသုတ စွယ်စုံ ခေါင်းစဉ် ဆိုပီး ၄ ပိုင်းပိုင်းထားပါတယ်။
ဒါကိုတော့ ကျွန်တော် C# ကို လေ့လာကာစက အပိုင်းတွေ ပါပါတယ်။ အရင်က C++ တွေ လည်း တခါတည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အပေါ်မှာလို့ ကျွန်တော် စာအုပ်နာမည်တွေကို ရေးမပေးတော့ပါဘူး စာအုပ်က ၁၀၀ ကျော် ဖြစ်နေလို့ပါ။ အဲ့ ၁၀၀ ကျော်ရေးပြလိုက်ရင် အောက်မှာ စာမျက်နာကြီး အရမ်းရှည်သွားမှာ စိုးလို့ပါ။ အကို အစ်မ များအနေနဲ့ ဒီလင့်ကို သွားပီး ကြည့်လိုက်ပါ စာအုပ်ခေါင်းစဉ်ကြိုက်တာကို ကြည့်ပီး တလင့်ချင်းဆီက နေ ဒေါင်းယူနိင်ပါတယ်။ တအုပ်ချင်းဆီကို ဒေါင်းယူချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အပေါ်က လင့်ကို ရောက်အောင် သွားပေးပါ။
C# ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် လင့် . စာအုပ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်
ဒါကတော့ ကျွန်တော် အကြည်တော် စာအုပ်တွေကို ဖတ်ဖြစ်တယ်။ အဲ့မှာ တော်တော်များများက ကောင်းတယ်။ ရယ်မောစရာ စိတ်အပန်းပြေစရာလေးတွေကို ခဏ အမော ဖြေဖြစ်တာပေါ့ဗျာ.စိတ်ထဲ့ အရမ်းမွန်းကျပ်နေပီလို့ ထင်ရင် အကြည်တော် စာအုပ်တအုပ်လောက်ကို Print ထုတ်ပီး ကျွန်တော် စာဖတ်ဖြစ်တယ်။ အပျင်းလည်းပြေ စိတ်လည်းပြေပေါ။ အကို အစ်မတို့မှာလည်း မောပန်းမူတွေ ဘ၀ အမော လေးတွေ ရှိတာလေးတွေ ရှိလာခဲံရင် ဒီစာအုပ်လေးတွေ ဖတ်ပီး အမောပြေနိင်ဖို့ ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အကြည်တော် စာအုပ်များ ဒေါင်းလုပ်ချရန်
Microsoft office ကို ကိုကျော်ဇင်သန့် တင်ပေးထားတာလည်းတွေ့မိပါသေးတယ် ဘယ်လင့်မှန်းမသိလို့ ကျွန်တော် ပြန်မညွန်းလိုက်တော့ပါဘူး။ ကိုကျော်ဇင်သန့်တင်ပေးထားဘူးတဲ့ စာအုပ်တွေ အကုန်နီးပါးပါပါတယ်။ Microsoft office Trainning အတွက်လို့ပဲ့ ဆိုရမှာပဲ့ Office ကို ကောင်းကောင်း သုံးတက်ဖို့တော့ လိုတယ် ။ ရုံးသုံး လုပ်ငန်းတွေ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆောင်ရွက်မူတွေ နဲ့ တော်တော်များများက Microsoft office နဲ့ ဆက်စပ်နေတာက များတယ် ကျွမ်းကျင်အဆင့်တခု ရောက်ဖို့ နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ လက်တွေ စမ်းကြည့်နိင်ဖို့ အောက်က စာအုပ်တွေက အတိုင်းအတာ တခုထိ ရောက်အောင် ပို့ပေးနိင်လိမ့်မယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အပိုင်း ၃ ရဲ့ နောက်ဆုံး အပိုင်းလေးကတော့ အထွေထွေ ဗဟုသုတ ရသ စွယ်စုံ စာအုပ်များပါ။
ဒီအပိုင်းမှာ ဒေါက်တာ . ဆရာကြီးတွေ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာတွေ နဲ့ ကျန်းမာရေး (အဟာရ. မျက်စိ . စိတ်ရောဂါ . ကလေး ကျန်းမာရေး .လူကြီးများသိသင့်သော.အချက်များ နှင့် အသိပညာမျာ.) ။ နောက်ထပ်ကတော့ ဆရာဝန်တွေရဲ့ လမ်းညွန်ချက်တွေ. ဗုဒ္ဓတရားတော် အကြောင်းများ. အချစ်အကြောင်း အိပ်မက်အကြောင်း. အလုပ်တခုရဲ့ တန်ဖိုး အလှတရားရဲ့ စွမ်းအား နှင့် အထွေထွေ အကုန်ပါပဲ့ ။ ကျွန်တော် ဖတ်လို့ မှတ်လို့ ကောင်းတဲ့ စာအုပ်အကုန်လုံးကို စုစည်း ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါ။ အကုန်လုံး နီးပါး အကောင်းတွေချည်းပါပဲ့( ကျွန်တော့ အကြိုက်ပြောတာနော်) အကိုအစ်မတွေကရော ကြိုက်မလားမသိဘူး။
ဘ၀မှာ သင်ခန်းစာတွေ အတွေ့အကြုံတွေကို ကိုယ်ကိုတိုင် ရယူရမယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဒီလိုစာအုပ်တွေကတော့ ဖတ်ထားသင့်တယ်။ အတော်သင့်အတန်သင့်အနည်းဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံး ဖြေရှင်းပေးနိင်မှာပါ။ စာဖတ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကို အကိုအစ်မတို့လည်း သိပီးသားနေမှာပါ ။ ကျွန်တော် ဆက် လေမရှည်တော့ပါဘူး။
အောက်က လင့်မှာ ယူနိင်ပါတယ်။
Mediafire လင့်ကြည့်လို့ရတဲ့ အကိုအစ်မ များအနေနဲ့ကတော့ မြန်မာလို့ တွေခေါင်းစဉ်တွေကို မြင်ရမှာ ဖြစ်တဲ့တွက် ကြိုက်တဲ့ စာအုပ်ကို ဒေါင်းယူနိင်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်နဲ့ သွေဖီသွားမယ် မထင်လို့ ကျွန်တော် ဒီအပိုင်းကို ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။မမြင်ရတဲ့ သူတွေ အကိုအစ်မတွေကို ကျွန်တော် သက်သက် နောက်ဆုံး ပိုစ်မှာ စီစဉ်ပေးပါမယ်။
ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ အနားယူပါတော့မယ်။ အကိုအစ်မများ အားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Last edited by သန့်ဇင်ဌေး; 30-03-2011 at 06:02 AM..
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုစံငြိမ်း, ခိုင်မြဲ, ချစ်သမီး, စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, ဘဘကြီး, မျိုးမင်းဆန်း, ဝင်းကျော်ဦး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဦးသာကြီး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မေဦးမွန်, မောင်ကီး, မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, amaung344, aungphyo, AZM, bagothar85, Emc Arkar, FollowITBoy, foothet, g00gle, KznT, Lwin Thu, minthumon, phoetharlay, PyaitSone, thetzin, wunna313, zo
မြန်မာမိသားစုအစ်ကို အစ်မများခင်ဗျာ ခုကျွန်တော် ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ စာအုပ်လေးတွေကို စုပြီးတင်ပေးထားပါတယ်..ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ စာအုပ်တွေပြန့်မသွားပဲတစ်နေရာထဲမှာ လင့်ချိတ်ပြီးဖတ်လို့ရအောင်ပါ..ခုကွှန်တော်တင်ပေးတဲ့စာအုပ်တွေဟာ မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်ထဲကရော။တစ်ခြားအစ်ကိုအစ်မများဆိုဒ်တွေ။ပြီးတော့ အစ်ကိုတွေအစ်မတွေဆီကနေမရှိလို့ ကွှန်တော်တောင်းထားတဲ့ စာအုပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်..ကွှန်တော် ကိုယ်တိုင် စာရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး..အကုန်လုံးသူများ ဟာတွေပါပဲ...အဲ့တာတွေကို စုပြီး ကွှန်တော် Pdf လင့်လေးတွေချိတ်ပြီး လုပ်ထားပေးပါတယ်..ဖတ်တဲ့ အချိန်မှာ ပြင်းမှာစိုးလို့ စာအုပ်လေးတွေထဲမှာ MP3 သချင်းလေးတွေအနည်းငယ်ထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ..သချင်းနားထောင်ရင်းဖတ်ပေါ့နော်..
1.	A(U Zaw Lin)
3.	Adobe PhotoShop 7.0(Mya)
7.	BuildingaPC Part (Mya)
8.	Dictionary of computing
9.	Dictionary Of Networking
11.	How to Make Myanmar Blog
14.	Learning Css by Saturmgod
15.	Making Blog
17.	Robin Williams,Steve Cumming-Computer Jargon
19.	The Universal Bummerese-English
20.	Understanding PC Hardware
21.	Hacker Dictionary(English)
22.	Window7Installation
23.	Window7Installation Guide
24.	Wordpress Making(ကိုရာမည ဖိုးလပြည့်)
25.	ZEND PHP Certification Study Guide
အောက်မှာ ကွှန်တော် Ifile လေးနဲ့တင်ပေးထားပါတယ်..(473.303 MB)ပါ ..upload လုပ်တာအဆင်ပြေလို့တင်လိုက်တာပါ..ဒေါင်းတာအဆင်မပြေရင်ပြန်ပြောပါခင်ဗျာ..
Last edited by tu tu; 22-04-2011 at 12:21 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 35 ဦးတို့မှ aungphyo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုစံငြိမ်း, စစ်တွေသားချေ, ဆရာသဘိတ်, ဖန်ဆင်းရှင်, ဘဘကြီး, ရဲထက်သာ, ဝင်းကျော်ဦး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်ကီး, မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, အောင်ပြည့်ဖြိုး, မြင့်မိုရ်, ၀င်းကျော်စိုး, amaung344, arkaraung, aungkohtat, aungzaw, bagothar85, bonge, FollowITBoy, g00gle, KznT, Lwin Thu, minthumon, phoetharlay, PyaitSone, runner.zaw, thetzin, thura.it, thureinsoe, zo
ကျွန်တော် ဒီနေ့ ဒီပေါ်ကတင်ထားခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေကို ပဲ့ Mediafire ကနေ့ လင့်ထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်လို့ တချို့တွေက Mediafire က နေဒေါင်းရတာကိုမှ ကြိုက်ပီး တချို့ က ဒေါင်းလို့ မရတဲ့နေရာက အကိုအစ်မ များအတွက် ကျွန်တော် တနေရာကနေ လင့် ထပ်ဖြည့်ပေးသွားပါဦးမယ်။ ခုတော့ Mediafire ကနေ ပဲ့သေချာ အားဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Video Tutorials တွေကိုလည်း ကျွန်တော် တင်ထားတာ ၂၀ ဂစ်လောက်ရှိပါတယ် အဆင်ပြေအောင်လို့ လင့်တွေ ညှိနေတုန်းမလို့ မတင်ပေးဖြစ်သေးတာပါ။ တင်ပေးဖြစ်ရင်လည်း ကျွန်တော် ဒီအောက်မှာပဲ့ ဆက်တင်ပေးဖြစ်သွားမယ် ထင်ပါတယ်။ Tutorial တွေထဲ့မှာတော့ အများကြီးပါပဲ။ ဘာတွေ ပါလာမယ်ဆိုတာကို နောက်မှ ဆက်ညွန်းပေးပါ့မယ်။ ခုတော့ လင့်ထပ်ဖြည့်ပေးတာမို့ အကိုအစ်မတို့ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်
ဆရာသဘိတ်, ဘဘကြီး, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, အောင်ပြည့်ဖြိုး, amaung344, aungphyo, bagothar85, foothet, g00gle, KznT, Lwin Thu, minthumon, phoetharlay, thetzin, thureinsoe, yemyatlin, zo
ခွင့်တိုင်ထားပေ့မယ်လည်း စာရေးချင်စိတ်ပေါက်တာနဲ့ ထရေးလိုက်တာပါ။ကျွန်တော် ဒီနေ့ တော့ ကျွန်တော့ရဲ့ စာကြည့်တိုက်လေးနဲ့ ပတ်သတ်ပီး ကျွန်တော် ဆက်စပ်လေ့လာခဲ့တဲ့ အပိုင်းလေးတွေကို Video ဖိုင်လေးတွေ ကို ကျွန်တော် ဆက်လက် တင်ပြပေးသွားပါမယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော် လည်း အရင်ကတည်းက တင်ပေးဖို့ပါပဲ့ ဟိုဘက် လှည့်ရေးဒီဘက်လှည့်ရေးနဲ့ အဆုံးမသတ်ပေးနိင်ဘူး ဖြစ်နေတာ။ တကယ်တော့ ကျွန်တော် ဒီထဲ့မှာပါတဲ့ Tutorial တွေ ကို အားကိုးခဲ့ရတာ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် စာအုပ်တွေနဲ့ Video တွေကို တွဲ့ပီး လေ့လာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အဲ့လိုတွဲလေ့လာတော့ မျက်စိထဲလည်း မြင်သလို စာအုပ်ဖတ်ရတဲ့ချိန်မှာလည်း နားလည် သဘောပေါက်လွယ် ပါတယ်။ တပိုင်းချင်းဆီကို ရှင်းပြမနေတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော် အပေါ်မှာ တင်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ အဆက်တွေပါပဲ့ ။
(၁) Autocad Tutorial
(၂)complete Java Tutorials
(၃) Learning Execel VCD
(၅) How to BuildaPC
(၆) HTML Tutorial
(၇) HTML .CSS
(၈) ISO . AIO
(၉) Microsoft Visual Studio
(၁၀)Microsoft Office 2010 Training
(၁၁) Photoshop Tutorial
(၁၁) PHP .
(၁၃) ကွန်ပျူတာ ထိန်းသိမ်း ပြုပြင်းနည်းများ
ကျွန်တော် အပေါ်မှာ တင်ပေးခဲ့တာတွေ အားလုံးက ကျွန်တော် လေ့လာခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေ Tutorial တွေ ဖိုင်တွေ ချည်းပါပဲ့။ လေ့လာလိုသူတွေတွက် အမှတ်တရ လည်းဖြစ် ကျွန်တော့ရဲ့ ပညာဒါနပါ။ လိုအပ်လာလို့ ရှိရင် လင့်တွေ ချိန်းတင်ပေးသွားပါဦးမယ်။ ခုတော့ ဒီလောက်နဲ့ ရပ်နားလိုက်ပါဦးမယ်။
$ညိုမင်းလွင်$, ဆရာသဘိတ်, ဘဘကြီး, ရဲရဲလေး, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, အောင်ပြည့်ဖြိုး, ကြယ်စင်စိုး, ပြာဂလောင်, amaung344, arkaraung, aungphyo, bagothar85, foothet, g00gle, htaynaingwin, KznT, Lwin Thu, minthumon, ninimar, phoetharlay, Thein Htun, thetzin, tu tu, zo
ပြန်စာ - Video Tutorial
Visual Studio က ဖိုင်မရှိဘူး ပြောနေတယ် ကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်စစ်ပေးပါလားခင်ဗျာ
စာအုပ်တွေရှယ်ပးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ zoard အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, မောင်သံသရာ, အောင်ပြည့်ဖြိုး, Lwin Thu, zo
ပို့စ် 12 ခုအတွက် 80 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အကိုတို.က ဘာလို. up4vn ကတင်တာလဲ မသိဘူး။ သူက ခဏလေးနဲ. file တွေ ပျက်ကုန်တယ်။ Mediafire နဲ. 4shared က ပိုကောင်းတယ်လို. ထင်ပါတယ်။ ဒီ ၂ ခုက သူများတင်ထားတာကို Download မလုပ်ပဲ ကိုယ်.အကောက်ထဲ တန်းထဲ.လို.ရတယ်။ အကိုတင်ထားတဲ. Mediafire မှာဆို File ကို Select လုပ်ပြီး More Options နောက် Save Selected to Account ဆိုကိုယ်. အကောက်ထဲကို တန်းဝင်တယ်။ Sign In တော. လုပ်ပေးရတာပေါ.။ ကျွန်တော်က ဒီနည်းနဲ.ပဲ ဗီဒီရိုတွေ သိမ်းထားတာ။ လိုချင်မှ Download လုပ်ရုံပဲ။ ဒီနည်းနဲ.ဆို Backup လုပ်ပေးတဲ.လူ များသွားမယ်။ စာကြည်.တိုက်ဆိုတော. အကို. Account ပျက်သွားရင် တခြားသူတွေ ယူလို. မရမှဆိုးလို.ပါ။ ဒါဆို အကုန် အလကား ဖြစ်ကုန်မယ်လယ်။ ၂ ၊ ၃ ယောက်လောက်ကို အကူအညီတောင်းပြီး Backup လုပ်ထားခိုင်းသင်.တယ်။ Mediafire က မြန်မာက ဒေါင်းလို.ရမယ်ထင်တာပဲ။ ကျွန်တော်က မြန်မာ လူငယ်ကြိုက် ဆိုဒ်တချို.မှာ ရုပ်ရှင်တင်ဖူးတယ်။ တော်တော်ဒေါင်းကြတယ်။ ၁၅ဝ-၂ဝဝ လောက်ကို ရှိတာ။ တခါတလေ ဒီထက်တောင် များသေးတယ်။ ဒါတောင် ဆိုဒ်က ၆ဝ ကျော်တယ်။ နိုင်ငံခြားက ကြီးပဲတော. မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တာပဲ။
တခုကျန်သွားလို. အကောက်တခုကို share မလုပ်ပဲ ထားထား။ မတော်တဆ file ဖျက်သွားဦးမယ်။
Last edited by ဘဘကြီး; 25-04-2011 at 03:03 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ ဘဘကြီး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆရာသဘိတ်, သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, အောင်ပြည့်ဖြိုး, arkaraung, minthumon, zo
Find More Posts by ဘဘကြီး
အကိုတို.က ဘာလို. up4vn ကတင်တာလဲ မသိဘူး။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီက ဘာလို့ တင်တာလည်းဆိုတာကို အရင်က ကိုကျော်ဇင်သန့် ဒီပိုစ်လေး Multiple File-Hosting Sites များအကြောင်း မှာ ရှင်းပြဖူးပါတယ် .။သူဆီက တင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ တလင့်တင်ပီး ၆ လင့် က နေ ဒေါင်းလို့ ရနိင်ပါတယ်.။ တလင့်တည်းပေးတာထက် ပိုပီး အဆင်ပြေနိင်တာက တကြောင်း လင့်သေတာ နည်းတာက တကြောင်းပေါ့ ။ ဥပမာ ကျွန်တော်တိုက Mediafire ကနေ တင်ပေးတယ်ဆိုရင် မြန်မာက လူတွေ ဒေါင်းလို့ရတာ ရှိသလို မရတာ ရှိတယ်။ အဲ့တော့ တလင့်တည်းက တင်ပေးမယ်ဆိုရင် မရနိင်တဲ့ သူတွေတွက် နောက်တခါ လင့် ပြန်ချိန်းတင်ပေးရတယ်။ ဒီလိုဆို သိပ်အဆင်မပြေနိင်ဘူးခင်ဗျ။ ဒီ Up4vn ကတ င်ပေးတော့ အနည်းဆုံး လင့် ၆ လင့်ထဲ့မှာ ၄ လင့်လောက်က ဒေါင်းလို့ အဆင်ပြေနိင်တယ် ။ ဥပမာ Mediafire . Ifile .Megaupload တို့ လင့်တို့တွေ က ပါနေတော့ မြန်မာက Mediafire ကို ဒေါင်းမရတာ Ifile ကနေ ဒေါင်းလို့ ရတယ်ပေါ့။ နောက်ဆုံး ဘယ်လင့်မှ မရတောင် Megaupload ကနေ ရတယ် ဆိုပီး တင်ပေးတာပါ ။ ကျွန်တော်တို့ လင့်တွေ ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ပျက်စီးလာတာကို Up4vn က တင်ထားပေးခြင်း နဲ့ပဲ့ ထိန်းတာက အနည်းဆုံး megaupload လင့်တော့ မသေပဲ့ ကျန်ခဲ့တာ မလို့ပါ။
Mediafire နဲ. 4shared က ပိုကောင်းတယ်လို. ထင်ပါတယ်။ ဒီ ၂ ခုက သူများတင်ထားတာကို Download မလုပ်ပဲ ကိုယ်.အကောက်ထဲ တန်းထဲ.လို.ရတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ဘဘကြီးပြောသလို ဒီ ၂ လင့် ကနေ တင်ပေးချင်ပါတယ်။ ဖိုရမ်မှာ အရင်က Ifile Mediafire . 4shaed . zshare တို့ ကနေ တင်ပေးထားတဲ့ လင့်တွေကို တွေ့ပါတယ်။ သူတို့ တွေ လင့်သေများတယ်။ အဲ့လို လင့်တွေက နေ တင်ပေးမယ် ဆိုပါဆို. ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ပြည်တော် ပြန်ပီးသွားပီးနောက်ပိုင်းမှာ အဲ့ တင်ပေးထားတဲ့ Hosting ဆိုဒ်တွေရဲ့ အကောင့်ကို ၃ လ တခါတော့ အနည်းဆုံး ပြန်ဝင်ပေးရတယ်။ မ၀င်ပေးရင် သူက တင်ထားသမျှ လင့်တွေ ဖိုင်တွေ အကုန်လုံးကို ဖျက်ပစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဆို ပိုပီး ဆုံးရူံးမူ များတယ် လင့်ပျက်တာ များတယ် ထင်လို့ ကျွန်တော်တို့ အများအဆင်ပြေနိင်မယ့် Mutiple Hosting ဆိုဒ်တွေကို အသုံးပြုလာတာပါ။
စာကြည်.တိုက်ဆိုတော. အကို. Account ပျက်သွားရင် တခြားသူတွေ ယူလို. မရမှဆိုးလို.ပါ။
ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တို့ အကောင့်ပျက်သွားမှာစိုးလို့ ဒီလင့်ကနေတင်ပေးနေတဲ့တွက် ဒီ up4vn လင့်မှာဖောက်ထားတဲ့ အကောင့် ပျက်သွားရင်တောင် တခြားဆိုဒ်တွေမှာတင်ကျန်ရစ်ပီးသားဖြစ်နေပီမို့ ကျွန်တော် တို့ အကောင့်ပျက်လည်း ပြန်ပြင်စရာ နည်းသွားတာပေါ့။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တင်ပေးတုန်း ကတော့ သေချာပြန်စစ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ် ခု တခုကျန်နေတာကိုတော့ ကျွန်တော်ပြန်ပြင်ပေးပါ့မယ်။ ကျွန်တော် တင်ဖို့ကျန်သွားတာမို့ပါ။ ကို zoard ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ
ဆရာသဘိတ်, ဘဘကြီး, နေမင်းမောင်, မောင်ကို, မောင်သံသရာ, အောင်ပြည့်ဖြိုး, amaung344, arkaraung, aungphyo, bagothar85, FollowITBoy, g00gle, KoBaKhat, Lwin Thu, minthike, minthumon, runner.zaw, thetzin, zo
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ဇော်ဝင်းသိန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဇော်ဝင်းသိန်း
Originally Posted by ဇော်ဝင်းသိန်း
အစ်ကိုက Ifile ကနေ ဒေါင်းချင်တာနဲ့ တူတယ်.. ကျန်တဲ့လင့်တွေ တော်တော်များများကတော့ ကောင်းပါသေးတယ်.. အဲဒါ တွေကို ကိုသန့်ဇင်ကိုယ်စား ကျွန်တော် Ifile ကို ပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.. အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ..
Blog ( Wordpress , Jommla )
Last edited by bagothar85; 31-07-2011 at 06:05 PM..
$ညိုမင်းလွင်$, သန့်ဇင်ဌေး, တောကြောင်, မောင်ကို, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, arkaraung, aungphyo, blackNwhite, bonge, Emc Arkar, g00gle, KoBaKhat, Lwin Thu, microsoft, minthike, minthumon, phyulayswe07, PyaitSone, thetzin, tu tu, zo
ပို့စ်7ခုအတွက် 26 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ ဘုန်မောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သူရိန်22, မောင်သံသရာ, aungphyo, bonge, Lwin Thu, minthumon, phyulayswe07, thetzin, zo
Find More Posts by ဘုန်မောင်
တည်နေရာ: ၀ါးခယ်မမြို့ ။
ပြန်စာ - ကွန်ပျူတာနှင့်ပါတ်သက်သောစာအုပ&#
ကျွန်တော့် ရဲ့ ပက်ကျိကော်နက်ရှင်က473MBကို၁၀နာ၇ီလောက်ဒေါင်း၇တာ300MBလောက်မှာsever
ကsaveလုပ်ဖို့ နေရာမတွေ့ ဘူးဆိုပြီးပြုတ်သွားတယ်။ခုမှစလေ့ လာနေရလို့ ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ၀င်းကျော်စိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, aungphyo, thetzin, zo
Find More Posts by ၀င်းကျော်စိုး
အခုလို မျှဝေ ပေးတဲ့အတွက် အတော်ကို လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. တစု တစည်းတည်းဖြစ်တဲ့အတွက် လေ့လာရတာ ပိုလဲ အစဉ်ပြေပါတယ်.. ကျေးဇူးပြုပြီး ရှိသေး တယ်ဆို ရင် ဆက်လက်တင်ပေးလိုပါတယ်.. ကျေးဇူးပါ. ကိုသန့်ဇင်ဌေး
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ ရန်မျိုးအောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, တောကြောင်, မောင်သံသရာ, g00gle, minthumon, thetzin, thureinsoe, zo
မျှဝေ ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ၊
Architecture နဲ့ပတ်သက်တာတွေေ၇ာ တင်ပေးလို့ ၇မလားခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ mohan အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, FollowITBoy, thetzin, zo
ဟိုမွှေဒီမွှေ လုပ်ရင်းနဲ့ စာအုပ် တွေ ဖတ်ချင်သူများအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် Websites ကလေးတွေတွေ့လို့ပြန် ပြီးတော့ မျှလိုက်ပါတယ်.. မြန်မာ ဆိုဒ်တော့မဟုတ်ပါဘူး.. ဒါပေမယ့် တချို့ ဆိုဒ်တွေ ထဲမှာ မြန်မာလို စာအုပ်တွေ Upload တင်ထားတာတွေ ရှိတော့ မြန်မာ စာအုပ်ပါ ရှာလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်..
သူ့အထဲမှာညွှန်းထားတာတော့ အကောင်းဆုံး Websites အခု ( ၁၈ ) လို့ပြောတာပဲ …နဂိုမူရင်းရေးထားတဲ့ သူကတော့ အခု ၂၀ ပါ.. ဒါပေမယ့် အဲဒီ့အထဲက တချို့ ဆိုဒ်တွေကမရှိတော့လို့ကျန်တာကလေးကိုပဲ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် .. Free Ebook Download ပါ .. Free နော် Free .. ကျွန်တော်တို့ တွေက Free ဆိုမှ စိတ်ဝင်စား ကြလို့ ကြေငြာပေးတာပါ…အဲဒီ့ ၁၈ ခုကတော့ အောက်မှာနော်… လိုလို မယ်မယ် ပေါ့ .. ကူးပြီးတော့ Save ရင် Save ထားလိုက်ပါ
၁ ။ http://www.freebookspot.in/
၂ ။ http://www.free-ebooks.net/
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ Online magazine တွေ အပြင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စာရေးဆရာ ၊ စာအုပ်အမည်တွေကိုပါ ရေးပြီး
တော့ ရှာနိုင်ပါတယ် ..
၃ ။ http://manybooks.net/
၄ ။ http://www.getfreeebooks.com/
၅ ။ http://freecomputerbooks.com/
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ပါတ်သတ်တာ ကိုလေ့လာချင်သူများအတွက် အထူး သင့်လျော်တဲ့ ဆိုဒ် တစ်ခုပါ.
ခေါင်းစဉ်ခွဲပေါင်း ၁၅၀ ရှိပါတယ် … ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ကွန်ပျူတာ စာအုပ်တော်တော်များများကိုလည်း
၆ ။ http://www.freetechbooks.com/
၇ ။ http://www.scribd.com/
ဒီဆိုဒ်မှာကလေးကိုတော့ တော်တော်များများ ရင်းနှီးမှာပါ … မြန်မာလိုစာအုပ်တွေကိုလည်း
ရှာဖွေတွေ့ ရှိနိုင်ပါတယ် .. ဒါအပြင့် အဲဒီ့ ဆိုဒ်မှာ ကိုယ်ဖော်ပြချင်တဲ့ စာအုပ်ကို Upload တင် ပြီးရင် ကိုယ့် ရဲ့
Blog ပေါ်မှာ I-Paper နဲ့ ဖော်ပြနိုင်အောင် ခွင့်ပြုထားပါတယ် …
၈ ။ http://knowfree.net/
၉ ။ http://www.onlinefreeebooks.net/
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ ကဏ္ဍပေါင်းစုံ က စာအုပ်တွေကို ရယူနိုင်ပါတယ် ။ တော်တော် များပါတယ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ
တွေ ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေ တခြား ဘက်တွေ ကစာအုပ်တွေကိုရော ရနိုင်ပါတယ် ။
၁၀ ။ http://www.memoware.com/
၁၁ ။ http://www.zillr.org/
၁၂ ။ http://www.onlinecomputerbooks.com/
၁၃ ။ http://www.snipfiles.com/
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ စာအုပ်တွေ အပြင် Software တွေကိုပါ ရရှိုနိုင်ပါတယ်.. Software တွေကိုတော့ Free မရနိုင်
ဘူး ထင်ပါတယ် ..:)
၁၄ ။ http://www.bookyards.com/
၁၈ ။ http://www.ebooklobby.com/
စာအုပ်တွေကို တော့ Online မှာ တခြားနေရာက ဆိုဒ်တွေမှာလည်း ရှာနိုင်ပါတယ် …ကျွန်တော်အနေနဲ့
လည်း အဲဒီ့ ဆိုဒ်ကလေးကနေတွေ့လို့ သဘော ကျလို့ ပြန်လည် မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် …
ကိုယ်လိုချင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်း အလွယ်တကူ ရှာတဲ့ အခါမှာ အကူအညီ ပြုမယ်ထင်ပါတယ် ..
အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းလျက် … Infinity Power (IP)
အောက်ပါအသင်းဝင် 15 ဦးတို့မှ ဇော်ရဲပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, နီထွန်းဦး, သန့်ဇင်ဌေး, ဇေယျာအေး, ဇေကြီး, arkaraung, aungphyo, bagothar85, FollowITBoy, g00gle, kingofvirus, kyawminkhoung, lawliet, stability09, zo
ပို့စ် 42 ခုအတွက် 114 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ရမဟ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
aungphyo, stability09, zo
Find More Posts by ရမဟ
ပြန်စာ - မျိုးသူရ ရဲ့စာအုပ်စင်
အင်တာနက်ကို အဆင့်မြင့်မြင့်သုံးတတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ် စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်အုပ်ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ရမဟ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အခု တင်ပေးလိုက်တဲ့ စာအုပ်ကတော့ မျိုးသူရ ရေးထားတဲ့ နေ့စဉ်သုံး အင်တာနက် ဆိုတဲ့ စာအုပ် ပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. အင်တာနက်ကို ခုမှ စပြီး သုံးမဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ အထောက် အကူပြုပါလိမ့်မယ် .. ဒီစာအုပ်မှာ ဂျီမေးလ် အသုံးပြုနည်း ၊ ဂျီမေးလ်အကောင့်ဖောက်နည်း ၊ အီးမေးလ်ပို့ခြင်း စတဲ့ အခြေခံ အချက်အလက်တွေကို ရေးပေးထားပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ရမဟ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ် 64 ခုအတွက် 146 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
E-Book များလိုချင်လျှင် ဒီ Websit မှာယူလိုက်ပါ
ဒီ Topic လေးကို ၀င်ကြည့်လိုက်တော့ . . . နည်းပညာ မြန်မာ E-book လိုချင်တဲ့သူများလို့ . . တစ်ယောက်ချင်းအတွက် တစ်ခုချင်းရှာပေးနေရင် ပြီးမှာ မဟုတ်တော့လို့ . . . အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ ဆိုဒ် ကနေသာ မိမိတို့ လိုချင်တဲ့ စာအုပ်တွေကို ရှာယူလိုက်ကြပါခင်ဗျာ . . . . ကျွန်တော်ရှာတွေ့ထားတာလေး ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုတဲ့သဘောပါခင်ဗျာ . . . ရှိပြီးသားဆိုရင်လည်း ဖျက်ပစ်ပေးဖို့ admin ကိုတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ . . .
စာအုပ်တွေ အများကြီးပါခင်ဗျာ . . ကော်နက်ရှင် တက်ပြီးတဲ့အထိ စောင့်ပါ . . . အဲဒါမှ စာအုပ်တွေ အများကြီးကို တွေ့ရမှာပါ ခင်ဗျာ . . ..
Credit : ကီးကီး @ johnkee9
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ UJOKER အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ငြိမ်းချမ်း, zo
Find More Posts by UJOKER
ကိုရမဟရဲ့ (မျိုးသူရရဲ့အခမဲ့ဝက်ဆိုက်များရေးတင်နည်း စာအုပ်လေးပါ
ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားပါတယ်) ဆိုတာ ဒေါင်းလုပ် ဖို့ လင့်လည်း မတွေ့ပါလားခဗျာ
ပြန်ကြည့်ကြည့်ပေးစေလိုပါတယ်... လေ့လာချင် စမ်းချင်လို့ပါ
ပြီးတော့ ... အစ်ကိုတို့ ကျွန်တော် adobe after effect စာအုပ်လေး လိုချင်လိုက်တာဗျ
မရှာတတ်ဘူး ရှာတွေ့တော့ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ရှိတယ် မြန်မာလိုရှိရင် ကူညီပေးပါဦးနော်... ကျေးဇူးပါ
အက်မင်များခင်ဗျား . . . . ဒီပို့စ်ကို မသင့်တော်ဘူးထင်ရင် ဖျက်ပေးပါနော် . . .
ဘာလို့လဲဆိုတော့ (youth) သင်တန်းကျောင်းက ဦးဇော်လင်းရဲ့ ဆိုဒ် ဖြစ်နေလို့ပါ . . . မြန်မြန် ဒေါင်းပြီး ပို့စ် ကို ဖျက်ချင်လည်း ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ . . . .
ကျွန်တော်လည်း ရှာတွေ့ထားတာလေး လက်တို့ပေးလိုက်တာပါ . . .
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ UJOKER အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, 99p0is0n, bagothar85, htun30, zo
MYOB ( Computerized Accounting ) စာအုပ်ရှိရင် တင်ပေးပါနော်။
စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာ တဆိုင်မှ ရှာမရလို့ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ဆွိ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Originally Posted by ဆွိ
User Guides တွေလည်း သူ့ site မှာ ရှိပါတယ်။
မြန်မာလိုရှိမလား လိုက်ရှာသေးတယ် MYOB တော့မတွေ့ဘူး။ Peachtree ပဲတွေ့တယ်။
Peachtree Accounting (ဝေဖြိုးအောင်)
$ညိုမင်းလွင်$, ဆွိ, htun30, zo
ွှအချိန်ကုန်ခံပီးရှာပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မဂျီးသုရေ။ MYOB မြန်မာလိုရေးထားတာအရင်က စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာရှိတယ်တဲ့
ခု လိုက်ရှာတာ တဆိုင်မှ မရှိဘူး သင်တန်းကပေးတဲ့စာအုပ်တော့ ရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့စိတ်တိုင်းသိပ်မကျဘူးဖြစ်နေလို့ :P
ရှာပေးထားတဲ့ english လိုရေးထားတာကိုပဲ ကြိုးစားပြီးဖတ်ကြည့်ပါ့မယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ဆွိ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, runner.zaw, zo
နောက်ထပ် ပူဆာချင်လို့ပါ :)
Adobe InDesign စာအုပ်လေးရှိရင် ပေးပါအုံး နော်
ဒီတလော ဆွိက ပြန်မမျှနိုင်သေးပဲ တောင်းပဲ တောင်းနေရတာ အားနာပါတယ် ကူညီပါအုံးနော်
အဲ့လင့်ထဲက ဖိုင်လေး ဒေါင်းလို့မရလို့ ကူညီကြပါအုံး
ဒီနေရာမှာ ကကကွန်ကထုတ်တဲ့ Adobe Indesign CS3 ဆိုတဲ့စာအုပ်လေး တင်ပေးထားတာ တွေ့ပါတယ်။ လင့်လည်း ကောင်းနေပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် အင်္ဂလိပ်လိုစာအုပ်တွေကိုတော့ ဒီနေရာမှာ နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်ပြီး Download နိုင်ပါတယ်။ အောက်နားလေးက Language လေးတော့ တချက်ကြည့်ပေါ့။ တခြားဘာသာတွေလည်း ရှိနေလို့ပါ။ ဒီနေရာမှာလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဒေါင်းရတာလည်း လွယ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ အစ်မ...
$ညိုမင်းလွင်$, ဆွိ, PyaitSone, tu tu
အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာ နဲ့မှ ဒေါင်းလို့ရတယ် အဲဒါမရှိရင် ဒေါင်းရတာ အဆင်မပြေဘူးနော်
မျိုးသူရ, အကြိုက်ဆုံး, ebook